တောင်တရုတ် ပင်လယ်အရေးက ပေးလိုက် တဲ့ သခ်န်း စာ… 👇👇👇 ( လင်းယုံ နဲ့ နဂါး စစ်များ ကစား ခဲ့ ရင် အမြတ် ထွက် မယ့် မြန်မာ အခြေ အနေ ) – Shwewiki.com
တောင်တရုတ် ပင်လယ်အရေးက ပေးလိုက် တဲ့ သခ်န်း စာ… 👇👇👇 ( လင်းယုံ နဲ့ နဂါး စစ်များ ကစား ခဲ့ ရင် အမြတ် ထွက် မယ့် မြန်မာ အခြေ အနေ )
လင်းယုံနဲ့ နဂါး စစ်များ ကစား ခဲ့ရင်… ကျုပ်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ အနေတတ် ရင်မြတ်မယ်ဆိုပြီး.. ကိုယ့်နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွား အတွက် ကြိုတွက် ပီး ပြခဲ့ ဘူးတယ်။ ဒီလို နဲ့ ရက်တွေ ကြာလာတော့…. Usတို့အုပ်စု အသာစီးရနေပြီလို့ ထင်ရပေမဲ့.. တဖြေးဖြေးနဲ့ ရုပ်လုံးပေါ်လာတာက… ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးမှာ.. ထာဝရမိတ်ဆွေဆိုတာ မရှိသလို… ထာဝရရန်သူ ဆိုတာ လည်း မရှိဘဲ ထာဝရ အကျိုးစီးပွားကိုသာ ရှေးရှုလာတာကို မြင်လာရတယ်….အကြောင်း ကတော့.. ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ … တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့.. အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားတဲ့ နိုင်ငံတွေ နဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ စကားတွေကြောင့်ပါ။
အမေရိကန် အုပ်စုဟာ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ … အင်ဒိုပစိဖိတ် မူအရ တောင် တရုတ် ပင်လယ်မှာ တရုတ်တွေရဲ့ စွက်ဖက်ခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်း၊ ကျူးကျော်ခြင်း စတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ အတွက် ….စစ်ရေးအရ ပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့အတွက်… အမေရိကန်၏ ဦးဆောင်မှုနှင့်အတူ. ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ဩစတြေးလျ၊ အိန္ဒိယ စတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အတူ မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေတာ ကိုတော့ အားလုံးအသိပါ။ တကယ်တော့… တောင်တရုတ်ပင်လယ် အရေးဟာ.. Usနဲ့တိုက်ရိုက် ပတ်သတ်ခြင်းမရှိပေမဲ့.. မတရားအနိုင်ကျင့် ကျူးကျော် နေတဲ့ တရုတ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ဝင်ပါရတာဖြစ်သလို.. ကျောင်းတော်က ရန်ကြွေးကြောင့်ဆိုရင်လည်း.. မမှားပါဘူး။
အဓိက ပတ်သတ်သူတွေ ကတော့.. ဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘရူနိုင်း၊ ဂျပန် စတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေကြတဲ့ ပြသနာကို အမေရိကန်က ဝင်ကူညီပေးရင်း.. အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးပီပီ ဦးဆောင်ပြီး ကန့်ကွက် ပယ်ချထားသလို.. စစ်ရေး ပြင်ဆင်မှု တွေမှာပါ ကူညီပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း… တောင်တရုတ်ပင်လယ် အရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့.. လူအား ငွေအား လက်နက်အင်အားက အစစအရာရာ အကုန်ကျခံပြီး လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သော်လည်း… Usက တကယ်တိုက်ဖို့ အတွက် အရှိန်အဟုန် မြှင့်လာနေချိန်မှာပဲ.. မဟာမိတ်တွေနိုင်ငံအချို့ဟာ အပြည့်အဝ ပါဝင် လာခြင်းမရှိတာကို.. ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ တွေ့လာရပါပြီ။ပထမဆုံး သစ္စာဖောက်လိုက်သူကတော့… ဒူတာတေး(ဖီလစ်ပိုင်) ပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့ မကျေနပ်တဲ့ အသံတွေထွက်လာပေမဲ့ တကယ်လက်လျှောင်လိုက်ပြီလို့..ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် …. တရုတ်ရဲ့ ပါဝါနဲ့ သြဇာဟာ USတို့တွက်ထားတာထက် ကြောက်ဖို့ကောင်းသလို… Covid-19 အရေးကို နိုင်ငံငယ်တွေ ကြောက်နေတယ် စိုးရိမ်နေတယ် ဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားမိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ဒူတာတေးဟာ..ပင်လယ်ပိုင်နက်နဲ့ ကာကွယ်ဆေး လဲသင့်ရင် လဲမယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေလို့ပါ။
ဘာလို့ဆို… ဘယ်ဘက်ကိုမှ မလိုက်ဘူး လို့ ဒူတာတေး ကိုယ်တိုင် ပြောလိုက် တဲ့စကားက တခုခုကို ကြောက်နေလို့ပါ။နောက် တစ်ယောက်.. ကိုယ့်အကျိုး စီးပွားကို ထိခိုက်လာ စေမယ့် အရာတွေကို လုပ်ဖို့အတွက် စိတ်ကူး မရှိတော့ဘူး ဆိုတဲ့ စကားကို ဒီရက်ထဲမှာပြောလိုက်တာက… #သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးပါ။တကယ် တိုက်တော့မယ်… တကယ် ဖြစ်တော့မယ် ဆိုပြီး အရှိန်မြှင့်လာ ချိန်မှာမှ ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြောင်းလဲသွားကြတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေ သိရတဲ့အခါ.. နိုင်ငံရေးမှာ… ထာဝရမိတ်ဆွေ ထာဝရရန်သူဆိုတာမျိုး မရှိပဲ…တကယ် ဖြစ်လာရင်.. မိမိနိုင်ငံနှင့်မိမိအကျိုးစီးပွားကိုပဲ ကြည့်ကြတာပါလားဆိုပြီး တွေးမိတဲ့အခါ… သူတို့တွေလည်း ကိုယ့်လိုပါပဲလား..တိုင်းပြည်တော့ အနာမခံဘူး အကျိုးမြတ်ပဲ ရရင်ယူမယ်ဆိုသူတွေလို့ တွေးရင်း.. တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်အရေးမှာ … ဘယ်ဘက် ကိုမှ လိုက်မှာမဟုတ်ပဲ … ကိုယ့်မူနဲ့ကိုယ်နေမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ မြန်မာအစိုးရကို ပိုပြီးလေးစားမိတယ်။ ဒါပဲလေ….. သူတို့တွေ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်း နေပေမဲ့… နိုင်ငံ ကို မထိပဲ မနာပဲ ရလာမဲ့ အကျိုးအမြတ်ဆိုရင်တော့ လိုချင် ရချင်တာက… တောင်တရုတ်ပင်လယ် အရေးက ပေးလိုက်တဲ့… သခ်န်းစာတွေ ကြောင့်ပါဗျာ။
တောငျတရုတျ ပငျလယျအရေးက ပေးလိုကျ တဲ့ သချနျး စာ… 👇👇👇 ( လငျးယုံ နဲ့ နဂါး စဈမြား ကစား ခဲ့ ရငျ အမွတျ ထှကျ မယျ့ မွနျမာ အခွေ အနေ )
လငျးယုံနဲ့ နဂါး စဈမြား ကစား ခဲ့ရငျ… ကြုပျတို့နိုငျငံအနနေဲ့ အနတေတျ ရငျမွတျမယျဆိုပွီး.. ကိုယျ့နိုငျငံ အကြိုးစီးပှား အတှကျ ကွိုတှကျ ပီး ပွခဲ့ ဘူးတယျ။ ဒီလို နဲ့ ရကျတှေ ကွာလာတော့…. Usတို့အုပျစု အသာစီးရနပွေီလို့ ထငျရပမေဲ့.. တဖွေးဖွေးနဲ့ ရုပျလုံးပျေါလာတာက… ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေးမှာ.. ထာဝရမိတျဆှဆေိုတာ မရှိသလို… ထာဝရရနျသူ ဆိုတာ လညျး မရှိဘဲ ထာဝရ အကြိုးစီးပှားကိုသာ ရှေးရှုလာတာကို မွငျလာရတယျ….အကွောငျး ကတော့.. ဒီရကျပိုငျးအတှငျးမှာပဲ … တောငျတရုတျပငျလယျအရေးနဲ့ပတျသတျလို့.. အပွောငျးလဲကွီး ပွောငျးလဲသှားတဲ့ နိုငျငံတှေ နဲ့ နိုငျငံ့ခေါငျးဆောငျတှေ ရဲ့ စကားတှကွေောငျ့ပါ။
အမရေိကနျ အုပျစုဟာ သူတို့သတျမှတျထားတဲ့ … အငျဒိုပစိဖိတျ မူအရ တောငျ တရုတျ ပငျလယျမှာ တရုတျတှရေဲ့ စှကျဖကျခွငျး၊ နှောကျယှကျခွငျး၊ ကြူးကြျောခွငျး စတဲ့ လုပျရပျတှေ အတှကျ ….စဈရေးအရ ပိတျဆို့နိုငျဖို့အတှကျ… အမရေိကနျ၏ ဦးဆောငျမှုနှငျ့အတူ. ဂပြနျ၊ ဗွိတိနျ၊ ဩစတွေးလြ၊ အိန်ဒိယ စတဲ့နိုငျငံတှနေဲ့အတူ မဟာမိတျဖှဲ့ပွီး စဈရေးလကေ့ငျြ့နတော ကိုတော့ အားလုံးအသိပါ။ တကယျတော့… တောငျတရုတျပငျလယျ အရေးဟာ.. Usနဲ့တိုကျရိုကျ ပတျသတျခွငျးမရှိပမေဲ့.. မတရားအနိုငျကငျြ့ ကြူးကြျော နတေဲ့ တရုတျရဲ့ လုပျရပျတှကွေောငျ့ ဝငျပါရတာဖွဈသလို.. ကြောငျးတျောက ရနျကွှေးကွောငျ့ဆိုရငျလညျး.. မမှားပါဘူး။
အဓိက ပတျသတျသူတှေ ကတော့.. ဒသေအတှငျးနိုငျငံတှေ ဖွဈတဲ့ ဖိလဈပိုငျ၊ အငျဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဗီယကျနမျ၊ ဘရူနိုငျး၊ ဂပြနျ စတဲ့နိုငျငံတှနေဲ့ တရုတျတို့ရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှု အငွငျးပှားနကွေတဲ့ ပွသနာကို အမရေိကနျက ဝငျကူညီပေးရငျး.. အငျအားကွီးနိုငျငံကွီးပီပီ ဦးဆောငျပွီး ကနျ့ကှကျ ပယျခထြားသလို.. စဈရေး ပွငျဆငျမှု တှမှောပါ ကူညီပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး… တောငျတရုတျပငျလယျ အရေးနဲ့ပတျသတျလို့.. လူအား ငှအေား လကျနကျအငျအားက အစစအရာရာ အကုနျကခြံပွီး လုပျဆောငျပေးခဲ့သျောလညျး… Usက တကယျတိုကျဖို့ အတှကျ အရှိနျအဟုနျ မွှငျ့လာနခြေိနျမှာပဲ.. မဟာမိတျတှနေိုငျငံအခြို့ဟာ အပွညျ့အဝ ပါဝငျ လာခွငျးမရှိတာကို.. ဒီရကျပိုငျးထဲမှာ တှလေ့ာရပါပွီ။ပထမဆုံး သစ်စာဖောကျလိုကျသူကတော့… ဒူတာတေး(ဖီလဈပိုငျ) ပါ။ ပွညျသူတှရေဲ့ မကနြေပျတဲ့ အသံတှထှေကျလာပမေဲ့ တကယျလကျလြှောငျလိုကျပွီလို့..ပွောလို့ရပါတယျ။ဒီအခကျြကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ …. တရုတျရဲ့ ပါဝါနဲ့ သွဇာဟာ USတို့တှကျထားတာထကျ ကွောကျဖို့ကောငျးသလို… Covid-19 အရေးကို နိုငျငံငယျတှေ ကွောကျနတေယျ စိုးရိမျနတေယျ ဆိုတာကိုလညျး စဉျးစားမိမယျလို့ ထငျပါတယျ။ဒူတာတေးဟာ..ပငျလယျပိုငျနကျနဲ့ ကာကှယျဆေး လဲသငျ့ရငျ လဲမယျ ဆိုတဲ့ ပုံစံဖွဈနလေို့ပါ။
ဘာလို့ဆို… ဘယျဘကျကိုမှ မလိုကျဘူး လို့ ဒူတာတေး ကိုယျတိုငျ ပွောလိုကျ တဲ့စကားက တခုခုကို ကွောကျနလေို့ပါ။နောကျ တဈယောကျ.. ကိုယျ့အကြိုး စီးပှားကို ထိခိုကျလာ စမေယျ့ အရာတှကေို လုပျဖို့အတှကျ စိတျကူး မရှိတော့ဘူး ဆိုတဲ့ စကားကို ဒီရကျထဲမှာပွောလိုကျတာက… #သွစတွေးလနြိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးပါ။တကယျ တိုကျတော့မယျ… တကယျ ဖွဈတော့မယျ ဆိုပွီး အရှိနျမွှငျ့လာ ခြိနျမှာမှ ရကျပိုငျးအတှငျး ပွောငျးလဲသှားကွတဲ့ ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှရေဲ့ ရပျတညျခကျြတှေ သိရတဲ့အခါ.. နိုငျငံရေးမှာ… ထာဝရမိတျဆှေ ထာဝရရနျသူဆိုတာမြိုး မရှိပဲ…တကယျ ဖွဈလာရငျ.. မိမိနိုငျငံနှငျ့မိမိအကြိုးစီးပှားကိုပဲ ကွညျ့ကွတာပါလားဆိုပွီး တှေးမိတဲ့အခါ… သူတို့တှလေညျး ကိုယျ့လိုပါပဲလား..တိုငျးပွညျတော့ အနာမခံဘူး အကြိုးမွတျပဲ ရရငျယူမယျဆိုသူတှလေို့ တှေးရငျး.. တရုတျနဲ့ အမရေိကနျအရေးမှာ … ဘယျဘကျ ကိုမှ လိုကျမှာမဟုတျပဲ … ကိုယျ့မူနဲ့ကိုယျနမေယျလို့ ပွောထားတဲ့ မွနျမာအစိုးရကို ပိုပွီးလေးစားမိတယျ။ ဒါပဲလေ….. သူတို့တှေ ဖွဈပါစလေို့ ဆုတောငျး နပေမေဲ့… နိုငျငံ ကို မထိပဲ မနာပဲ ရလာမဲ့ အကြိုးအမွတျဆိုရငျတော့ လိုခငျြ ရခငျြတာက… တောငျတရုတျပငျလယျ အရေးက ပေးလိုကျတဲ့… သချနျးစာတှေ ကွောငျ့ပါဗြာ။
ဖခင် မြွေကိုက်လို့ဆုံးပါးခဲ့ပြီး၊ မုဆိုးမမိခင်နှင့် မီးမရှိတဲ့ရွာမှာနေပြီးမြန်မာ နိုင်ငံ သမိုင်းမှာ မရှိဘူး‌ သေးတဲ့ ဝိဇ္ဇာ ဘာသာတွဲ၊ ၆ဘာသာ ဂုဏ်ထူး ရှင် မောင်ဝေယံလင်း ကျော်